भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय May 11, 2018	0 67 Views
ने पालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओ लीले भारत भ्रमण गरे को एक महिना नबित्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरे न्द्र मो दी आज ने पाल आउँदै हुनुहुन्छ । ने पालसँग सदियौ ं पुरानो पारस् परिक सम्बन्ध रहे को दक्षिणको छिमे की भारतको उच्च ने तृत्व आफ्नो मुलुकमा आउँदा स्वागत सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्दछ । ने पालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखे र उच्च तहबाट भ्रमण हुनु निसन्दे ह स्वागतयो ग्य हो  । तर यस् ता भ्रमणहरु विवादको घे रामा तानिनु राम्रो हुँदै न ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण मूलतः धार्मिक एवं सांस् कृतिक उद्दे श्यबाट मात्रै अभिप्रे रित छ भन्न मिल्दै न । उहाँले जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शन एवं पूजाआजा गनेर् कार्यक्रम छ । विशे षतः जनकपुर र काठमाडौ ंमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई गरिन थाले को नागरिक अभिनन्दनको व्यापक आलो चना भइरहे को छ । मो दीलाई गरिने नागरिक अभिनन्दनको औ चित्य र आवश्यकतामाथि नै धे रै प्रश्नहरु उठे का छन् । यसरी प्रश्न उठ्नु अस् वाभाविक हो इन । किनभने यतिबे ला ने पाली जनताले के ही प्रश्नहरुको जवाफ खो जे का छन् ।
अघिल्लो भ्रमणमा ने पालको संसदलाई सम्बो धन गर्दा मो दीले जसरी वाहवाही पाएका थिए, त्यो अवस् था अब बिल्कुलै छै न । यतिबे ला मो दीले ने पाली जनतालाई दिने नयाँ सन्दे श के ही दे खिदै न । मो दीको बो ली र व्यवहार फरक भएको ने पाली जन–जनले महसुस गरिसके का छन् । त्यस माने मा उनको बो लीले विश्वसनीय अर्थ राख्दै न । बरु उनको व्यवहार सुध्रिन्छ कि सुध्रिन्न, यसमा धे रै को ध्यान के न्द्रित भएको पाइन्छ । तर पछिल्ला गतिविधि हे र्दा व्यवहार सुध्रने लक्षण दे खिदै न । अब ने पाली पक्षले उनको बो लीमा विश्वास ग¥यो भने धो का खाने सम्भावना नै बढी छ ।
ने पालले आफ्नो संविधान ठूलो बहुमतका साथ संविधानसभाबाट बनाएर के गल्ती गरे को थियो ? यसको जवाफ मो दीले दिनै पनेर् हुन्छ । यदि दिदै नन् भने उनी धूर्त र बे इमान भएको बुझ्नुपनेर् हुन्छ । भारतले भने जस् तो संविधान बनाउन अस् वीकार गर्नु के ने पालको अपराध हो ? के ने पालले आफ्नो संविधान आफै बनाउने सार्वभौ म अधिकार राख्दै न ? ने पाल र ने पाली जनताबिरुद्ध नाकाबन्दी गनेर् अपराधप्रति भारतीय प्रधानमन्त्रीले स् पष्ट शब्दमा माफी माग्न सक्नुपर्छ । अब यस् तो गल्ती नगनेर् प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
मो दीलाई अत्यन्तै सतर्कतापूर्वक स्वागत गरिनुपर्छ । भारतले ने पाली सार्वभौ मिकतालाई कमजो र पानेर् , टुक्र्याउने सो चे को छ भने यो उसका लागि धे रै महंगो पनेर् छ । ने पालको भूबनो ट र भौ गो लिक अवस् था भारतवे ष्टित जस् तो दे खिए पनि अब परिस् िथतिमा क्रमिक बदलाव आएको छ । उत्तरतर्फ नयाँ नाकाहरु खो ले र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुमा नै ने पाल र ने पाली जनताको दीर्घकालीन हित छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतसँगको पुरानो पारस् परिक सम्बन्धलाई सुधार गरे र लै जानुको विकल्प पनि हामीसँग छै न । सीमावर्ती क्षे त्रमा दुई दे शका जनताबीच घनिष्ट पारिवारिक सम्बन्धहरु छन् । अहिले पनि भारतीय से नामा ने पाली युवाहरुले रगत पसिना बगाइरहे का छन् । दुई मुलुकबीचको यो संवे दनशीलतालाई आत्मसात गरे र नै ने पाल भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
मो दी सिधै काठमाडौ ं आएर जनकपुर गएको भए राम्रो सन्दे श जाने थियो  । भारतीय नाकाबन्दीबाट सबै भन्दा बढी पीडा भो ग्ने दुई नं. प्रदे शका जनता हुन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत सीमामा बाँध बा“ध्दा सबै भन्दा बढी दुःख पाउने पनि त्यहींका जनता हुन् । त्यहींका जनताको नाममा मो दीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्नुको कुनै औ चित्य दे खिन्न । ने पाल र ने पालीलाई यति ठूलो पीडा दिएर पनि नागरिक अभिनन्दन हुनु आफै मा ठूलो बिडम्बना हो  । यसको जवाफ मो दीले कसरी दिनुहुन्छ, त्यसको प्रतीक्षाको घडी टाढा छै न । ने पाल भारत सम्बन्धलाई नयाँढंगले अगाडि बढाउने हो भने विगतको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । भारतको आफ्ना छिमे कीहरु कसै सँग पनि राम्रो सम्बन्ध छै न । क्षे त्रीय प्रभुत्ववादी, विस् तारवादी, है कमवादी सो च राख्दासम्म छिमे कीसँग राम्रो सम्बन्ध बन्दै न । भारतीय प्रधानमन्त्रीको ने पाल भ्रमणबाट दुई दे शबीचको सम्बन्धमा दे खिएको कालो बादल हट्न सक्यो भने भ्रमणको सार्थकता रहने छ । दुई दे शको सम्बन्ध द्विपक्षीय हित, आपसी विश्वास र सहयो गबाटै सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
Previous: न्वारानदेखि नै अङ्ग्रेजी ?
Next: डोजर निस्किएपछि घर मालिक आफै घर भत्काउन कस्सिए